Pane chaunoziva here nezve tutusï¼Ÿ - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Iwe unoziva here chimwe chinhu nezve tutusï¼Ÿ
Iwe unoziva here chimwe chinhu nezve tutus？
Maitiro echipfeko akasiyana kumberi kutamba ballet. Makumbo evatambi veBallet akatwasuka uye akareba, uye flatskirt inogona kuvaita akareba, uye iyo siketi ndeimwe yemhando dzechinyakare dze ballet.
Tutu: Nguo yekutamba yakajairwa inopfekwa naaballerina Yakagadzirwa nemana kana mashanu matete esirika kana nylon pleats, siketi yakasungirirwa kune yakashongedzwa chiuno chehukuru hwakakodzera. Izwi rechiFrench rokuti tutuoriginally raireva siketi pfupi yaipfekwa pasi pechipfeko chemutambi. Iyo yerudo tutu yaive yakareba, ingangoita 30 masentimita (12 inches) kubva pasi. Zvishoma nezvishoma zvakapfupika kusvika kuma1880s apo gumbo rese rakafumurwa. Dzidziso dzerudo nemasiketi zvinogona kuoneka mune zvipfeko zvemazuva ano zveballet.
2.Ballet koshitomu Standard
3. Mabatirwo ebvudzi revatambi ve ballet
Chero mhando yaunosanganisa bvudzi rako, inoita kuti irege kubuda. Izvo ndezve kuda mvere dzemvere, tsono dzebvudzi dzinofanira kusimbiswa zvine mutsindo, kuona kuti hazvizununguswe, senge dzakakandirwa iweyes yevamwe. Bhandi kana hengechefu rakasungirirwa kubvudzi rako rinofanira kuchengetedzwa. Mazuva ano vanhu vashoma vashoma vanoshandisa mambure evhudzi nekuti vazhinji vatambi vemitambo vane vhudzi refu uye vanogona kusungirira kumashure mune fundo.
Varume nhasi vanopfekawo vhudzi ravo rakareba, sothey tsvaga zvishandiso zvekuisunga kuti isavhara kumeso kwavo whenthey spin kana kusvetuka. Vatambi vazhinji nhasi vanoshandisa bhendi refu, rakamanikana rakasungirirwa pamaziso avo kuchengetedza bvudzi kuti risadonhe, vachitaridzika zvakanyanya sevamwari vakanaka veGomo reOlympus.
Yapfuura:Ndeapi mana akakosha maitiro e ballet?
Tevere:Havana kumbozvarwa vakakwana, vatambi vane nguva dzisingaverengeke mushure mekushandurwa kwekudonha